Trafikan-drongony : 210 sarona, olona dimy voasambotra
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → octobre → 1 → Trafikan-drongony : 210 sarona, olona dimy voasambotra
Redaction Midi Madagasikara 1 octobre 2019 0 Commentaire
Rongony miteti-bidy an-tapitrisany maro any ho any indray no saron’ny zandary sy ny pôlisy teto an-drenivohitra sy tany amin’iny tapany avaratry ny Nosy iny ny faran’ny herinandro teo. Ny iray tany amin’ny distrikan’i Port Bergé, izay nahatratrarana rongony milanja eo amin’ny 180 kilao teo ho eo. Saron’ireo zandary ao amin’ny « poste fixe » Ambatomilahitrano, tao Andranotsiritsy, kaominina Andranomeva, ny alin’ny alakamisy hifoha zoma lasa teo. Angom-baovao tamin’ny olon-tsotra no nahafahan’ireo zandary nanakana avy hatrany ireo totakely, izay nilanja ireto rongony notsinjaraina tamin’ny gony miisa 12. Raha ny voalaza dia hoe saika hoentina haparitaka tany amin’iny faritra Tsaratanàna iny ireto rongony ireto. Olona roa no tra-tehaka tamin’io fotoana io. Ireto farany, izay nitsoaka raha vao nahita ireo mpitandro filaminana saingy voasambotra ihany rehefa nifanenjehana.
Ny faharoa dia teto Antananarivo, sarona tetsy Ankasina, ny zoma lasa teo. Milanja eo amin’ny 33 kilao eo ho eo ireto rongony tra-tehaky ny pôlisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina. Araka ny vaovao azo dia fanomezam-baovao avy amin’ny tsara sitrapo ihany koa no nahafahan’ireto mpitandro filaminana, nahalala ny fisian’ity trafikana rongony ity teny an-toerana. Nidina avy hatrany teny an-toerana izy ireo ary tamin’izany no nahitàna rongony nafatratra tanaty gony miisa roa sy valizy iray. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa avy any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy indray ireto zava-mahadomelina ireto ary nokasaina haparitaka eto an-drenivohitra.
Tao anatin’ireto fahatratrarana rongony tamin’ny faritra roa samy hafa ireto dia olona dimy no voasambotra, izay efa samy natolotra teny anivon’ny Fampanoavana sy nadoboka am-ponja vonjimaika avokoa. Ireo zava-mahadomelina kosa dia tsy maintsy nopetehina sy nodorana eo anatrehan’ny manam-pahefana, araka ny voalazan’ny lalàna manan-kery eto amintsika. Hita ho nirongatra tanteraka ity bizina rongony ity tato ho ato. Tsy mikely soroka koa anefa ireo mpitandro filaminana. Hany ka nandritra ny volana vitsivitsy izay dia efa aman-taoniny maro ireo rongony sarona.